Banyere Anyị - Binzhou Chengli Building Materials Co., Ltd.
Binzhou Chengli Building Materials Co., Ltd. emi odude ke mma mma nke Yellow River Delta Center City-Binzhou, n'ebe ugwu nke China. anyị ụlọ ọrụ na-ọkachamara pụrụ iche na usoro nke mmepụta, nnyocha, mmepe, na n'ire nke ihe admixtures.
Binzhou Chengli Building Materials Co., Ltd. na-ekpuchi mpaghara nke 38.53 mu, ya na 25086 square mita maka mpaghara ụlọ na 600 square mita maka nyocha sayensị na ụlọ nyocha. anyị wuru zuru ihe admixture mmepụta akara, chemical analysis na nkịtị onwunwe laabu na Shandong University, onwem na oge a na ngwá maka ji na-anwale nnukwu-ọnụ ọgụgụ ngwá na akụrụngwa.
Companylọ ọrụ anyị nwere nyocha siri ike na mmepe nke gụnyere ndị dọkịta, ndị nna-ukwu nke Shandong University.our isi ngwaahịa: polycarboxylate superplasticizer mmiri mmiri na ntụ ntụ, sodium naphthalene sulfonate formaldehyde, aliphatic superplasticizer, sodium / calcium lignosulfonate, sodium gluconate, antifreeze, ome osooso, defoamer , ihe ntinye ikuku, wdg.
Binzhou Chengli Building Materials Co., LTD mgbe niile rube isi na àgwà dị ka ntọala, ọhụrụ dị ka ike, na-agbalịsi ike ihe mmako ụlọ ọrụ onye ndu. Company'slọ ọrụ anyị na-eguzosi ike n'ezi ihe, ike na mma ngwaahịa nweta ụlọ ọrụ nnabata. General njikwa na ndị ọrụ niile na ụlọ ọrụ ahụ nabatara ndị enyi sitere na ụdị ndụ niile ịbịa, nduzi na mkparịta ụka azụmahịa.